Fampiasam-bola hampitomboana ny saina mahavariana ao Boztepe RayHaber | raillynews
[15 / 01 / 2020] Minisitry ny minisitra: 'Istanbul no ho santionany voalohany amin'ny fampiharana amin'ny tanàna Smart'	Ankara 06
[15 / 01 / 2020] Channel Istanbul Polemics ao amin'ny Smart Cities sy ny Kongresy monisipaly	Ankara 06
[15 / 01 / 2020] Nanomboka tany Ankara ny kaongresin'ny Smart Cities sy ny Munisipaly	Ankara 06
[15 / 01 / 2020] Foibe Altunizade Metrobus nitarina	34 Istanbul
[15 / 01 / 2020] Ho fetibe mareva-doko mandritra ity taona ity ny fetin'ny ririnina any Winter	16 Bursa
HomeTORKIAFaritra mainty hoditraTafika 52Fampiasam-bola atao hampitomboana ny mahasarika an'i Boztepe
13 / 01 / 2020 Tafika 52, ANKAPOBENY, Faritra mainty hoditra, TORKIA, TELPHER
Ny fampiasam-bola hampitomboana ny fiantsoana an'i boztepen dia ho velona
Ny Munisipaly Metropolitan Ordu dia manohy ny fametrahana fampiasam-bola izay hampitombo ny fisarihana Boztepe. Ato anatin'ny faritry ny tetikasa, hankafy an'i Boztepe ny olom-pirenena miaraka amin'ny lalana an-tongotra mitaingina vato, lalana varotra 27, fikambanan-tany maintso.
Manodidina ny 500 metatra eo ho eo ny ranomasina Boztepe'de Sales Units Buffet sy Landscape Arrangement Project no nanomboka ny fananganana ekipa, ireo mpitsidika dia afaka nijery mora foana ny tanin'ny Ordu ary hanome faritra hividianana vokatra eo an-toerana.
HITANAO ATAO METY MBOLA 600
Ny Kaominin'i Metropolitan Boztepe, 7 metatra ny halavany ary 600 metatra ny halavany, izay ampiasaina ho làlan-kaleha, dia nandrafitra ilay tetik'asa manontolo ho famaky. Faritra asa an-tongotra an-tongotra, vondron-trano fivarotana ary fikambanan-tany taorian'ny fika.
27 FIVORIANA SALAMO MBOLA TOKOA
Tao anatin'ny faritry ny tetikasa, vondron-barotra 27 no namolavola tamin'ny alàlan'ny famaritana ny modely maritrano arak'asa ho an'ny lozika mivarotra tsy ara-dalàna ao amin'ny faritra. Noho ny asa vita, ny olom-pirenena dia afaka mankafy an'i Boztepe ary mankafy faritra izay ahafahany mandeha mora sy miantsena tsy misy fitohanana fiara.
"TENY FIVORIANA PERCENT 20"
Ny sekretera jeneralin'ny monisipaly Metropolitan Coşkun Alp sy ny sekretera lefitry ny sekretera jeneraly Bülent examinişman dia nandinika ny asa teo amin'ny tranokala. Nilaza ny sekretera jeneraly Alp, fa ından Nisy sary niparitaka tao Boztepe, iray amin'ireo toerana mahasarika ny Faritra Mainty. Ny lozam-pifidianana efa novarotana ny vokatra teo an-toerana dia teo amin'ny toerana misy ny fifamoivoizana fiara. Ny olom-pirenentsika dia maniry faritra avy any Boztepe izay ahafahany mijery tsara ny Ordu ary mitsidika ireo vola izay amidy ny vokatra eo an-toerana. Mba hamaranana izao fisavoritahana izao, ny Filohantsika Dr. Nanomboka fianarana teto izahay miaraka amin'ny torolàlana momba an'i Mehmet Hilmi Güler. Ny asan'ny rano sy ny asphalt ary ny asa rava vita amin'ny simenitra no vita tao amin'ilay tetikasa. Ny asa fanamboarana vy nooseho no atao. Manodidina ny 20 isan-jato no sisa aseho. Mbola manohy manintona ny hatsaran'ny Boztepe isika amin'ny asa ataontsika sy hataontsika
Ny fampiasam-bola amin'ny fitateram-bahoaka dia mampitombo ny hakanton'ny tanàna
Ny Railway dia hampitombo ny fitiavan'i Soma OSB
Tetikasa fampielezan-kevitra hampitsaharana ny fifamoivoizana mankany Malatya
Hamboly amin'ny fampiasam-bolan'ny bolongana i Boztepe
2 an'ny tetik'asa fanarenana ny Public Public Rehabilitation any Ordu. Tonga eo amin'ny fiainana ny dingana
Arkas Holding dia mampitombo ny vola ho an'ny fampiasambola amin'ny fitaterana lalamby…
Tokony hampitombo ny sehatra ao amin'ny sehatry ny logistics
Zava-baravarana ho any amin'ny tratr'i Boztepe
Hanatsara ny tarehin'i Torbalı ny sidina İZBAN
Ny fiarandalamby haingana dia hamelona indray ny fiainana ara-tsosialy sy ara-toekarenan'i Edirne
Ny famatsiam-bola ho an'ny fanjakana dia hampitombo ny famatsiam-bola amin'ny banky
Ny fampiasam-bola Indiana Rail ho fanamafisana ny fangataham-bato
Ny tetikasa Artvin ropeway dia velona amin'ny alàlan'ny governora
Ny tetikasa İnkum Teleferic dia mandalo amin'ny fiainana
Yedikuyular Ski Center ho an'ny fiainana
Boztepe Sales Units Buffet sy Landscape Arrangement Project
Minisitry ny minisitra: 'Istanbul no ho santionany voalohany amin'ny fampiharana amin'ny tanàna Smart'
Channel Istanbul Polemics ao amin'ny Smart Cities sy ny Kongresy monisipaly
Nanomboka tany Ankara ny kaongresin'ny Smart Cities sy ny Munisipaly
18 Stops vaovao avy ao Antalya Metropolitan ka hatrany Alanya
Orinasa marika amin'ny fitaterana Kyrgyzstan
Talentan'ny bisikileta Sunflower ho amin'ny fandresena
Ny kôdôkônan'i Kocaeli City Hospital Tram Line dia ho avy amin'ny ministera
Ny valintenin'ny IMM amin'ny fanambarana fampindramam-bolan'ny Metro an'ny Minisitry ny Harena sy ny Fitantanam-bola!
Ny marika fiorenan'ny fiara indrindra ao amin'ny taona: Fiat!
Hyundai Motorsport 2020 WRC Vonona amin'ny vanim-potoana
KIA manomboka ny 2020 miaraka amin'ny Fahafahana